သံဓာတ်ချို့တဲ့သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
?သံဓာတ်ချို့တဲ့သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများ?
‘သွေး’ ဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တော့ မရှိမဖြစ်တဲ့ အရာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးပမာဏ ငါးလီတာ ဝန်းကျင်အထိပြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတင်မကပဲ သွေးရဲ့ အရည်အသွေးလည်း ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်။ သွေးနီဥ သွေးဖြူဥ သွေးဥမွှားတွေရဲ့ အရေအတွက်တွေဟာ ရှိသင့်တဲ့ စံချိန်ဘောင် ပမာဏအတွင်းဝင်နေဖို့လိုပါတယ်။
သွေးနီဥတွေရဲ့ အရည်အသွေး အားနည်းတာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးနီဥတစ်ခုမှာ သွေးကို အရောင်ရင့်စေတဲ့ Hemoglobin ဆိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါဝင်ပြီး သူက သွေးနီဥတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အောက်စီဂျင်သယ်ပို့ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်ပေးရပါတယ်။ Hemoglobin ဖြစ်ဖို့အတွက် သံဓာတ်ကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အမျိုးသားတစ်ယောက်မှာ Hemoglobin(Hb) 13.5-17.5 gram/dl ရှိသင့်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ 12.0-15.5 gram/dl ရှိရပါမယ်။ သံဓာတ်ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ Iron Deficiency Anemiaဆိုတဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ်အများဆုံး ပြဿနာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
?ဘာကြောင့် သံဓာတ်ချို့တဲ့ သွေးအားနည်းကြတာလဲ ??
-အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးအများစုမှာ လစဉ် ဓမ္မတာ ကိစ္စကြောင့် သွေးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက် သွေးအားနည်းရပါတယ်။
– နာတာရှည် အစာအိမ်အနာ၊ အူမကြီးမှာဖြစ်တဲ့ အလုံးအကျိတ်နဲ့ ကင်ဆာတွေကြောင့်လည်း သွေးနည်းနည်းစီ ဆုံးရှုံးရင်း သွေးအားနည်းလာတတ်ပါတယ်။
– တီဘီလို အဆုတ်ရောဂါတွေကြောင့် ချောင်းဆိုးသွေးပါတာမျိုးကလည်း သွေးအားနည်းစေပါတယ်။
– ခန္ဓာကိုယ်မှာ သန်ကောင်တွေ ပေါက်ပွားလာပြီး သန်ချလေ့မရှိသူတွေမှာလည်း သွေးအားနည်းတတ်တာတွေ့ရပါတယ်။
– နာတာရှည် ရောဂါတစ်ခုခုရှိနေရင်လည်း သွေးအားနည်းနေတတ်ပါတယ်။
– မကြာခဏ သွေးလှူသူတွေမှာလည်း သံဓာတ်ချို့တဲ့ပြီး သွေးအားနည်းလာနိုင်တာမို့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။
သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသားတွေ၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစတာတွေကို ရှောင်စားသူတွေ၊ အစားအရမ်းရွေးသူတွေမှာ သံဓာတ်တဖြည်းဖြည်း ချို့တဲ့လာပြီး သွေးအားနည်းနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာတော့ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် သံဓာတ်လိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာမှုနဲ့ သွေးရဲ့ အရည်ပါဝင်မှုထုထည်မြင့်လာတာကြောင့် သံဓာတ်မလုံလောက်လို့ သွေးအားနည်းလာနိုင်ပါတယ်။
?ခန္ဓာကိုယ်မှ သံဓာတ်ကို မစုပ်ယူနိုင်ခြင်း
အစားအသောက်မှာ သံဓာတ်ပါပေမဲ့လည်း အူသိမ်က မစုပ်ယူဘူးဆိုရင် သွေးအားနည်းလာနိုင်ပါတယ်။
– Celiac disease လို အာဟာရ စုပ်ယူမှုပျက်ယွင်းစေတဲ့ ရောဂါမျိုး
– အူသိမ်ကို ဖြတ်တောက်ခွဲစိတ်ထားရရင်
– လက်ဖက်၊ လက်ဖက်ရည် စတာတွေကို အစားအသောက်နဲ့ တွဲစားမိရင်
– အစာအိမ်မှ အစာခြေရည် gastric acid မထွက်အောင် ပိတ်စေတဲ့ အစာအိမ်ဆေးတွေ သောက်နေရရင်
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ သံဓာတ်စုပ်ယူမှု မကောင်းတဲ့အတွက် သွေးအားနည်းလာနိုင်ပါတယ်။
Vitamin C ကတော့ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။
အားလုံး သံဓာတ်ပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ..